456 Craft Ukusinda – Ukukopa&Ukuqhawula – Iingcebiso ze-Android cheats
456 Craft Ukusinda – Ukukopa&Ukuqhawula
By ulawulo | EyeNkanga 25, 2021
Ukuba ukhe wadlala owona mdlalo udumileyo wasimahla 2021 – IBlocky Craft kunye nemidlalo yokusinda, awuyi kukwazi ukuyihoya le mowudi entsha yomdlalo. Indlela Yokusinda – owona mdlalo unomdla kwaye ulindeleke kwimowudi entsha yomdlalo kwibhloko ye-3D yobugcisa. Lo mdlalo yindibaniselwano yomdlalo wokusinda, umngeni wecookie, kunye ne-block craft 3d.
Kulo mdlalo, ungumdlali 456 kwaye kufuneka woyise ngaphezulu 400 abanye abadlali ukuba babe okuphumelela kuphela. Ukusinda kweCraft kunemidlalo emininzi yokulwa ye-3d efana nokukhanya okubomvu okuluhlaza, rock paper isikere shoot, ilitye elinqabileyo, kunye neelekese. Umceli mngeni wokusinda kumdlalo we-octopus wenzeka kwindawo yokudlala kwihlabathi leMini Craft.
Ngomdlalo wokukhanya oluhlaza obomvu, Umsebenzi wakho uqhutywa ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ngaphambi kwexesha. Isikere sephepha le-rock siyadubula, ilekese, kunye nelitye elinqabileyo ngumngeni ngamnye. Le midlalo ifuna isakhono sakho, ubukrelekrele, kunye nokukhawuleza. Ngokuqinisekileyo awunakungahoyi inqanaba lemela – umdlalo wokulwela ukusinda.
Lo mdlalo wokusinda webhlokhi encinci uya kwanelisa ukuthanda kwakho imiceli mngeni enzima, kunye nokuvuselela intelekelelo kunye nobuchule bakho. Ngapha koko, ikwangowona mdlalo usimahla we 2021.
Ukulungele ukungena kwihlabathi le-block craft ukuze uphile? Khuphela 456 ukusinda kobugcisa ngoku!
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Craft, Ukusinda
← Imibhobho – Imibhobho yokulinganisa – Ukukopa&Ukuqhawula Khulisa iMonster yakho – Ukukopa&Ukuqhawula →